အဆိုပါ Lego အဆိုပါ Incredibles ဂိမ်းယခုထွက်! | ငါက Mac ပါ
အဆိုပါ Lego အဆိုပါ Incredibles ဂိမ်းယခုထွက်!
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ macOS နှင့် Linux အတွက် Incredibles ဂိမ်းသစ်အတွက်စတင်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, ဒီနေ့ 21 နှင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် Lego အဆိုပါ Incredibles ဒီခေါင်းစဉ်အသစ်ကိုနှစ်သက်ချင်တဲ့ LEGO Saga ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ယခုအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဒါဟာဂိမ်းတစ်ခုပါ Incredibles နှင့် Incredibles2တို့၏ကျော်ကြားသော Disney Pixar ရုပ်ရှင်များမှမြင်ကွင်းများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤကိစ္စတွင် developer Feral ကဂိမ်းထဲသို့မစတင်ခင်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်အလက်နှစ်မျိုးကိုပေးထားသည်။ ပထမနှင့်အရေးကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည့်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များဖြစ်ပြီးဒုတိယမှာမူစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ မိမိအတင်ဆက်မှုကိုမသိခဲ့ပါ။
ဤအများမှာ ထောက်ပံ့ Mac များနှင့်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac ပေါ်မှာဂိမ်းကစားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်
၁၃ လက်မ MacBooks အားလုံးသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍
၂၀၁၅ နှစ်လယ်ပိုင်း မှစ၍ ၁၅ လက်မ MacBook Pros အားလုံး
၂၁.၅” iMacs အားလုံးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အားလုံး 27 "နှောင်းပိုင်း 2014 iMac
သိသာထင်ရှားတဲ့အားလုံး iMac Pro 27 "နှောင်းပိုင်း 2017
နောက်ဆုံး ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ Mac Pro အားလုံးထုတ်ဝေခဲ့သည်
ဤပံ့ပိုးထားသော Mac များစာရင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာ -
Mac OS X ကို 10.14 Mac OS X 10.14 (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသော (အကြံပြုသည်)
Processor ကို Intel Core i5 2.3 GHz နှင့်အထက်
ဂရပ်ဖစ် 2GB AMD Radeon R9 M290 နှင့်အထက်; 1.5GB Intel Iris Pro 5200 နှင့်အထက်
သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းအားများကို Edna Moda မှသေးငယ်ပေမယ့်အလွန့်အလွန်ကောင်းသောဒီဇိုင်းကိုသုံးပြီးပြုပြင်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် LEGO အဆောက်အ ဦ များကိုတည်ဆောက်ပါ။ Incrediladrillos များကိုစုဆောင်းပြီးသင်၏စွန့်စားမှုများတိုးတက်စေရန်ကြီးမားသောအဆောက်အ ဦး များကိုဖန်တီးပါ။
ရာဇ ၀ တ်မှုမြို့ကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးခရိုင်တစ်ခုစီကိုထိန်းချုပ်သောအထင်ကရလူကြမ်းကြီးများကိုအနိုင်ယူပါ။
ဖျော်ရည်တွင်စာလုံးရေ ၁၀၀ ကျော်သုံးပါ။ Pixar စကြာ ၀ fromာမှအထူးဇာတ်ကောင်များဖြစ်သော Woody မှ Toy Story, Merida မှ Merida နှင့် Lightning McQueen တို့မှကားများအပါအ ၀ င်။
ဒီဂိမ်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အဆိုပါရိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ 39,99 ၏စျေးနှုန်း အပြန်အလှန်အကျိုးပြု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » အဆိုပါ Lego အဆိုပါ Incredibles ဂိမ်းယခုထွက်!
Apple Watch နှင့် iPhone အတွက် Funxim Qi ကြိုးမဲ့ Pad
AutoMounter ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ network drives များသည်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်